गौतम बुद्ध भारतीय भएको भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको दाबी – तहल्का खबर.कम
झापा / भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले गौतम बुद्ध भारतीय भएको दाबी गरेका छन् ।
नेपालप्रति हेपाहा रवैया प्रस्तुत गर्दै आएका विदेशमन्त्री जयशंकरले एक भर्चुअल कार्यक्रममा बुद्ध भारतीय भएको बताएका हुन् ।
भारतीय उद्यमी तथा व्यवसायीहरुको छाता संगठन कन्फडरेसन अफ इण्डियन इन्डष्ट्रिद्वारा शनिबार आयोजित कन्फेडेरेसन अफ इन्डियन इन्डस्ट्रिजले गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै विदेशमन्त्री जयशंकरले संसारले सम्झिने दुई महान् भारतीयमा गौतम बुद्ध र महात्मा गान्धी रहेको बताएका हुन् ।
अन्तरक्रियाका क्रममा उनले भारतले मात्र होइन यी दुईलाई यसरी चिन्ने पूरै विश्वले नै महान् भारतीयका रुपमा चिन्ने बताएका छन् ।
प्रश्नकर्ताले उनलाई पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरजस्तै राष्ट्रिय स्वार्थलाई भन्दा विश्वव्यापी मान्यतालाई अघि राख्ने नेतृत्व भारतीय विदेश नीतिमा छ ? भन्ने प्रश्नमा जवाफमा उनले ‘म हाम्रै इतिहासबाट दुई उदाहरण दिन चाहन्छु ।
अहिलेसम्मका दुई जना महान भारतीय को हुन् ? जसलाई तपाईं सम्झन सक्नुहुन्छ ?,’ जयशंकरले भने,‘म भन्छु, एक जना गौतम बुद्ध हुन् । र अर्का महात्मा गान्धी हुन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि ठीक ६ वर्षअघि नेपालको व्यवस्थापिका संसदलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल बुद्ध भूमि भएको र सारा विश्वलाई शान्तिका लागि प्रेरित भएको उल्लेख गरेका थिए । न्यूजट्वेन्टी फोरबाट